Uyilo lweWebhusayithi ngo-2022-AudienceGain
Uyilo lweWebhusayithi eSisiseko
WEBSIGN DESIGN INKAMPANI
I-AudienceGain yinkampani yoyilo lwewebhusayithi edumileyo nebekekileyo egxile ekuboneleleni ngeenkonzo zoyilo lwewebhusayithi, imigangatho ye-SEO kunye nokuhambelana kweselula. Inkampani ineqela le-IT eliguqukayo, ukucinga ngokuyilayo, iminyaka emininzi yamava kwinkalo yeteknoloji yolwazi. I-AudienceGain ihlala imamela kwaye iyabuqonda ubunzima bomthengi ngamnye, apho inkampani iya kubonelela ngezona zisombululo zilungileyo ukunceda abathengi baqinisekiswe ngokupheleleyo kumgangatho ngexabiso eliphantsi.
Yintoni uYilo lweWebhusayithi?
Uyilo lwewebhusayithi yindibaniselwano yomsebenzi ovela kuyilo lomfanekiso, umxholo kunye nokubonisa ujongano lwewebhusayithi ukubeka ulwazi lwemifanekiso yabantu, imibutho kunye namashishini kwi-intanethi kwaye bafumane ingeniso ethe kratya. ngokufikelela abathengi abanokubakho kwi-Intanethi ngeWebhusayithi.
IWebhusayithi ngumfanekiso, uphawu, kunye nobuso beshishini kwi-Intanethi, ngoko ke ukwakha iwebhusayithi ngumsebenzi obalulekileyo kumntu okanye ishishini ukukhulisa uphawu lwabo kunye nokuxhasa ukuthengiswa kwe-Intanethi.
Inzuzo yoyilo lwewebhu
Ngexesha lobuchwephesha be-4.0, ukungabi nawebhusayithi kuya kwenza kube nzima kwinkampani okanye ishishini lakho ukukhuphisana nabanye okhuphisana nabo. Ngokukodwa xa imeko yobhubhane inzima, ukuthenga kwi-Intanethi kuye kwasebenza ngakumbi kunangaphambili. Ukuba newebhusayithi yeshishini lakho kwi-intanethi yinto engenakuthintelwa kwishishini lakho.
Inkonzo yoyilo lwewebhusayithi yobuchwephesha kukunceda abathengi banike umbono wendlela yokusebenza yenkampani, ivenkile, ishishini, ukongeza, abasebenzisi banoluvo lokuqala xa bendwendwela iwebhusayithi yeshishini.
Ukubonelela ngemigangatho ye-WordPress imixholo kwiindidi ezahlukeneyo zamashishini, kulula ukuyifaka, i-SEO yoyilo olusemgangathweni, oluhambelana nazo zonke izixhobo.
KUYO YONKE SEO
Iinkonzo ze-SEO ezisemgangathweni, i-AudienceGain yinkampani ehamba phambili enikezela ngeenkonzo ze-SEO zewebhusayithi kumashishini.
Ukukunceda ugcine ixesha kunye nomzamo wokukhathalela iwebhusayithi yakho, uhlaziye umxholo okanye wenze uhlengahlengiso olusisiseko. Into ekufuneka uyenzile kukusithemba
I-WEBSITE YOKULUNGISA NGENGXELO
Yandisa isantya seGoogle PageSpeed ​​Insights. Yisebenzise ukukhawulezisa indawo yakho ye-WordPress, uphucule i-SEO rankings, kunye nokunciphisa iibhidi zeNtengiso zikaGoogle.
Umbutho we-SEO kunye neenkonzo zoKwakha iNtlalo zikunceda ukuba ukwandise ukuthembela kwiwebhusayithi yakho kwaye ukhuthaze ukubekwa kwamagama angundoqo ngokukhawuleza nangokukhuselekileyo.
I-HOSTING / VPS UQINISEKISO OLUSHISHILEYO
Ukubonelela nge-Hosting, i-VPS engenamkhawulo, umgangatho ophezulu kunye ne-SSD drive, ukufikelela ngokukhawuleza kwedatha ukudala isiseko sokwandisa iWebhusayithi yakho.
Iiphakheji zenkonzo yoYilo lweWebhusayithi yobuNgcali
Sinikezela ngeepakethi zoyilo lwewebhu ngamaxabiso akhuphisanayo kwimarike.
Yila ngokwe template kwivenkile yojongano
Igama lesizinda sasimahla .com .net
Ukhuseleko lwe-SSL: Ewe
Ukusingathwa kwasimahla okunomthamo ophezulu
Ulwimi: Ulwimi olu-1
Ingxoxo ye-intanethi edibeneyo
Nika amanqaku ama-5 - iimveliso ezili-10
Uyilo lwasimahla lweebhanile ze-2 zepakethe ye-200 yeedola
Ukunikezela ngekhowudi yomthombo
Ukuphendula: Bonisa iPC / iThebhulethi / ifowuni
IiNtengiso zokuThengisa zasimahla
Iwaranti: Ngonaphakade ukuba usebenzisa i-AudienceGain Hosting
Yila ngokwethempleyithi exhasa ukuhlela
Igama lesizinda sasimahla .com .com.vn
Iilwimi: Iilwimi ezi-2
Nika amanqaku ama-8 - iimveliso ezili-20
Nika i-3 yoyilo lweBhana
Uyilo olukhethekileyo ngesicelo
Igama lesizinda sasimahla .vn .com.vn
Nika amanqaku ama-10 - iimveliso ezili-30
Nika i-4 yoyilo lweBhana
INKQUBO YOKUSEBENZA YE-AudiENCEGAIN WEB DESIGN COMPANY
I-AUDIENCEGAIN ihlala ilungiselela inkqubo yemihla ngemihla ukuze umsebenzi uhambe kakuhle ukonga iindleko kubathengi kangangoko kunokwenzeka. Sinikezela ngeenkonzo zoyilo lwewebhu kwihlabathi liphela.
Fumana izicelo kwaye ucebise abathengi
Fumana injongo yomthengi xa wenza iwebhusayithi, thumela ujongano lwesampulu yereferensi kwaye ucebise ujongano olufanelekileyo.
Vala ujongano lwewebhu, caphula kwaye uthumele ikhontrakthi
Emva kokuba umthengi avume itemplate ye-interface, emva koko ucaphule kwaye uthumele ikhontrakthi kumthengi ngereferensi.
Sayina ikhontrakthi ukufumana i-50% kwangaphambili kubathengi
Amaqela amabini avumelana nemigaqo yekhontrakthi, qhubeka usayine kwaye ufumane i-50% yemali yophuhliso lwewebhu kumthengi.
Ukuqhuba uphuhliso lwewebhu phantsi kwekhontrakthi
Yila iwebhusayithi ngokwexesha lekhontrakthi kwaye ubonise iziphumo ngokwenkqubela yewebhu. Uvavanyo kwaye ungenise iziphumo zokugqibela.
Uvavanyo lokwamkelwa kunye nemiyalelo malunga nendlela yokusebenzisa iwebhusayithi
Fumana ingxelo evela kubathengi, ukuhlela okupheleleyo kunye nokwamkelwa. Imiyalelo yokusebenzisa iwebhusayithi.
Iwaranti kunye nokhathalelo lwewebhusayithi ngexesha lokusetyenziswa kwenkonzo
Iwaranti-ukhathalelo-ukuhlelwa okusisiseko kubathengi ukuba uzibophelele ekusingatheni ixesha elide.
Iitemplates zojongano lwewebhusayithi ngoshishino
Umxholo woShishino lweWordPress
UkuHamba-iHotele WordPress Umxholo
Umxholo we-WordPress weMfundo
Izithambiso - Ubuhle WordPress Theme
I-WordPress Theme yangaphakathi-i-Architecture
Fashion WordPress Umxholo
Ukutya - Medicine WordPress Theme
Iindaba zomxholo weWordPress
IMIBUZO MALUNGA NEENKONZO ZOKUYILWA KWE-WEBSITE
Kuthatha ixesha elingakanani ukugqiba uyilo lwewebhusayithi kwi-AudienceGain?
Uyilo lwewebhusayithi ukugqitywa ludla ngokuthatha malunga neentsuku ze-15-30 ngokuxhomekeke kubukhulu, inani leelwimi kunye nobunzima bemveliso.
Lide kangakanani ixesha lewaranti xa usebenzisa inkonzo yoyilo lwewebhusayithi ye-AudienceGain?
Inkonzo yewaranti yewebhusayithi inexesha le-01 leminyaka ukusuka kumhla wokunikezelwa kwewebhusayithi. Umda wewaranti ubandakanya ukulungiswa kweempazamo zewebhusayithi ukuba kukho iimpazamo xa kuthelekiswa neempawu zoyilo, iimpazamo ezivela ngexesha lokusetyenziswa, kunye nokhuseleko lwewebhusayithi.
Ngaba uyilo lwewebhusayithi ye-AudienceGain ine-invoyisi kunye nekhontrakthi?
Umba iiyunithi ezininzi ezinomdla kuwo kukuba ingaba inkonzo yoyilo lwewebhusayithi ine-invoyisi. Isizathu soyilo lwewebhusayithi sikuluhlu lweenkonzo zesoftware ezingalawulwa yi-VAT, ngoko ke umba wee-invoyisi kubathengi awuvumelekanga ukuba utsale imveliso kumashishini. Kwaye i-AudienceGain inokuqinisekisa ukuba, xa uyila iwebhusayithi okanye usebenzisa ezinye iinkonzo zewebhusayithi, abathengi baya kunikwa ii-invoyisi ze-VAT kunye nezivumelwano.
Ngaba ndingalutshintsha ujongano olutsha ngexesha lokusetyenziswa? Ngaba kukho inkxaso yokuhlela okanye ukongeza ukusebenza?
Ngexesha lokusetyenziswa, ukuba ufuna ukutshintsha i-interface okanye uhlele imisebenzi emininzi, i-AudienceGain iya kuxhasa ngexabiso elihle.
Ngawo onke amava, ukuzinikela kunye nobuchwephesha, i-AudienceGain ngokuzithemba inika amashishini esona sisombululo silungileyo ukwenza iwebhusayithi yobuchwephesha ideisgn.
© 2016-2022 AudienceGain -Isisombululo sabadali boMxholo